Ndị na - ahụ maka Intanet - Olee otú e si ejikọta ụka dị iche iche na nzukọ?
N'ịgbaso atụmatụ nke nzukọ dị na Agba Ọhụụ, chọọchị dị iche iche nke Kraịst kwadoro. Nkwenkwe ha zuru oke na Bible na ịrapara na nkuzi ya bụ njikọ kachasị njikọta. Enweghị isi ụlọ ọrụ nke ụka, ọ dịghị òtù dị elu karịa ndị okenye ọgbakọ ọ bụla. Nzukọ dị iche iche na-arụ ọrụ afọ ofufo n'ịkwado ụmụ mgbei na ndị agadi, na-ekwusa ozi ọma na mpaghara ọhụrụ, na ọrụ ndị ọzọ yiri ya.
Ndị ụka nke Kraịst na-eduga kọleji iri anọ na ụlọ akwụkwọ sekọndrị, nakwa ụmụ iri na asaa na ụlọ iri na ise na ụlọ ndị agadi. E nwere ihe dịka magazin 40 na oge ndị ọzọ ndị ọ bụla nọ na chọọchị bipụtara. A na-akwado Ụlọ Nzukọ Highland Avenue na Abilene, Texas, na redio na telivishọn, nke a maara dị ka "The Herald of Truth". A na-etinye ọtụtụ n'ime atụmatụ ego nke afọ nke $ 1,200,000 na chọọchị ndị ọzọ nke Kraịst na ntọala n'efu. A na-anụ usoro redio ugbu a karịa ebe 800 redio, ebe usoro telivishọn na-apụta ugbu a karịa ebe 150 nọ. Mgbasa redio ọzọ zuru oke nke a maara dị ka "World Radio" nwere netwọk 28 na Brazil nanị, ma na-arụ ọrụ nke ọma na United States na ọtụtụ mba ndị ọzọ, ma na-emepụta ya n'asụsụ 14. Usoro mgbasa ozi zuru ezu na-eduga magazin mba dị iche iche malitere na November 1955.
Enweghị mgbakọ, nzukọ ọ bụla, ma ọ bụ akwụkwọ akwụkwọ. "Mkpịsị nke ejikọta" bụ otu iguzosi ike n'ihe nye ụkpụrụ nke mweghachi nke Kristian Ọhụrụ.